AbakwaSARS bamfake enkantolo lowo owabhala incwadi ngoMengameli Zuma | News24
AbakwaSARS bamfake enkantolo lowo owabhala incwadi ngoMengameli Zuma
Johannesburg - ISouth African Revenue Service (SARS) isifake amaphepha eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape ibopha intatheli uJacques Pauw ikhala ngokuthi washicilela ulwazi oluyimfihlo encwadini yakhe esihloko sithi The President's Keepers.
UKhomishana wakwa-SARS uTom Moyane encwadini efungelwe uveze ukuthi uPauw wadalula imininingwane yabakhokhintela, okungukwephula iTax Administration Act.
UMoyane uphinde wazwakalisa nokuthi uPauw kumele akhokhe izindleko zecala uma esiphikisa isicelo esifakwe ngabakwaSARS.
"Imininingwane yalolu hlobo akumele idalulwe emphakathini ngabantu abangenalo igunya lokwenza njalo," kusho uMoyane.
OLUNYE UDABA: U-SARS uzoyithathela izinyathelo eyencwadi ebhalwe ngoMengameli Zuma
Nokho la maphepha awazange ayiswe kwi-NB Publishers, kepha le nkampani eshicilela izincwadi ithi izozivikela mayelana nalesi siscelo ngonyaka ozayo.
"Singakusho nje kugcwale umlomo ukuthi sizomvikela umbhali wethu kanye nale ncwadi esicelweni esifakwe nguMoyane ngoba kuyacaca ukuthi umphakathi uyakuthakasela okulotshwe kuyo njengoba kuvela ukuthi uMengameli Jacob Zuma wasebenzisa izikhungo zezomthetho kuleli ukuze abalekele ukukhokha intela nanokuthi ubethola umholo kuRoy Moodley."
Ngemuva kokukhishwa kwale ncwadi ngo-Okthoba, iState Security Agency yathumela incwadi eyalela i-NB Publishers ukuba iyihoxise ezitolo.
Nokho le ncwadi isaqhubeka nokutholakala ezitolo.